R/wasaaraha Soomaaliya oo kulan casho sharaf ah la qaatay saraakiisha ciidamada Qalabka sida – idalenews.com
Ra’isalwasaraha xukuumdda Somaliya mudave Cabdi Faarax Shirdoon ‘’Saacid’’ Ayaa xalay kulan casha sharaf ah u sameeyey saraakiisha ciidamada qalabka sida waxaana ka qeyb galay ku simaha madaxweynaha ahna gudomoyaha Barlamanka Soomaliya Mudane Maxamed Sh. Cusman ‘’Jawaari’’.
Kulanka casho sharafka ah ayaa R/wasaaruhu u sameeyay saraakiisha ciidamada Nabadsugida, Booliiksa iyo Meleteriga, waxaana goob joog ka ahaa ku simaha Madaxweynaha ahna gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya, gudoomiyaha Maxkamada sare, wasiirro iyo xildhibaano.
R/wasaaraha Soomaaliya mudane Saacid oo kulanka kadib la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in ujeedada kulanku ay aheyd dhiirigelin iyo is xogwareeysi ku aadan howlaha ay ciidamadu ku xasilinayaan amaanka dalka.
Sidoo kale R/wasaaraha ayaa tilmaamay in kulankaasi diirada lagu saaray Amaanka Muqdisho oo uu sheegay in ciidamadu ay wax weyn ka bedeleen Amaankeeda.
Kulankan ayaa qeyb ka ah dadaalada ay dowladu ugu jirto dardar gelinta howlaha lagu xaqiijinayo amaanka caasimada Muqdisho.